Borgward တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နှစ်သက်စရာအကောင်းဆုံးကတော့ ကမ္ဘာအနှံ့ဘယ်နေရာအတွက်ကိုမဆို ဂျာမနီထုတ် အရည်အသွေးအတိုင်းပဲထုတ်လုပ်ပေးတာပါ။ အခုသုံးသပ်ပေးမယ့် Borgward BX7 TS ကတော့ sporty ဆန်တဲ့ လူငါးယောက်စီး SUV ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း : $68,000 (ရန်ကုန်လိုင်စင်အပါ အပြီးအစီး)
အင်ဂျင်၊ transmission ၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိ
Apple CarPlay ပါဝင်
4 Max Int. AWD
Octane 95 ဖြင့်သာပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိနိုင်
အရှေ့မီးကြီး LED မဖြစ်သေးခြင်း
Borgward ကထုတ်တဲ့ကားတွေဟာ Apple ထုတ် iPhone တွေနဲ့တူညီတဲ့အချက်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Borgward ကားတွေဟာ ဂျာမနီမှာအခြေစိုက်ပြီး တရုတ်ပြည်မှာ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်နိုင်ငံကိုပဲဖြန့်ဖြန့် တူညီတဲ့အရည်အသွေးရှိတာပါ။ အခုသုံးသပ်တင်ပြပေးမယ့် Borgward BX7 TS မှာကလည်း အင်ဂျင်ပိုင်း၊ transmission ပိုင်းနဲ့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာပိုင်းတွေဟာ ဂျာမနီမှာထုတ်လုပ်သလိုမျိုးထိပ်တန်းအဆင့်မှာရှိပေမယ့် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်တာကတော့ တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
Borgward BX7 TS ကတော့ မြင်မြင်ခြင်းပဲ sporty ဆန်တဲ့ SUV ဆိုတာကို သူရဲ့ လေခွဲအားကောင်းမယ့် aerodynamic အချိုးကိုကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အရှေ့ဘက်က စိန်ပွင့်ပုံဖေါ်ထားတဲ့ grille အပြင် daylight နဲ့ signal တွေကိုလည်း စိန်ပွင့်ပုံ မီးလုံးလေးတွေတပ်ဆင်ပေးထားတာကတော့ Borgward ရဲ့ diamond shape အမှတ်တံဆိပ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အပြင် အများနဲ့မတူတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ကိုလည်း ရရှိစေပါတယ်။
အသွေးအရောင်ပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ အနက်ရောင်အမှိန်က တကယ့်ကို ခန့်ပြီး ကျော့ရှင်းပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် ဒီလိုအရောင်အသွေးမျိုးရဖို့ sticker ကပ်တဲ့သူတွေတောင်မှရှိတယ်။ အရှေ့မီးတွေဟာ projector headlight ၊ Halogen ဖြစ်ပြီး daylight တို့ဘာတို့ကတော့ LED မီးတွေပါ။ အနောက်ဘက် မီးတန်းတပ်ဆင်မှုကလည်း ဆန်းသစ်မှုရှိတဲ့အတွက် အနောက်ကနေ တစ်ချက်မြင်ရုံနဲ့ Borgward လို့သိနိုင်တာဟာလည်း နှစ်သက်စရာကောင်းပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်ကားတွေဖြစ်တာနဲ့အညီ fog lamp မြှုပ်ထားတဲ့ bumper ဒီဇိုင်းဟာ sporty ဆန်သလို နံဘေးဖောင်းလိုင်းတွေကလည်း သေသပ်လှပပါတယ်။ Borgward ရဲ့အဆိုအရ Borgward အားလုံးရဲ့ တံခါးတွေဟာ ဖြတ်ဆက်မှုလုံးဝကင်းမဲ့အောင် ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်ပေးထားတယ်လို့သိရတယ်။
“အပြင်ပုံစံ ခန့်ထည်သပ်ရပ်တယ်။ ဘီးတစ်လုံးချင်းစီရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို သိရှိပြီး တစ်ဘီးချင်းစီ လိုသလောက် ပါဝါကို ပေးနိုင်တဲ့4Max Int. AWD ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကမြင့်မားတယ်။ အတွင်းခန်းကလည်း အဆင့်မြင့်ပြီး ဇိမ်ကျတယ်။ ဒီလိုအရည်အသွေးနဲ့ လူငါးယောက်စီး SUV ကတော့ Borgward BX7 TS ပါပဲ။”
အတွင်းခန်းထဲကို ဝင်ဝင်လိုက်ခြင်း သတိပြုမိ၊ နှစ်ခြိုက်မိတာကတော့ digital driver display နဲ့ infotainment display ပါ။ နှစ်ခုစလုံးက 12.3-inch ဖြစ်ပြီးတော့ infotaintment display ကတော့ တုန့်ပြန်မှုလျင်မြန်ချောမွေ့တဲ့ touch screen နဲ့ပါ။ Infotainment မျက်နှာပြင်ရဲ့ အကောင်းဆုံး feature ကတော့ Apple CarPlay ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဒီ feature က ကိုယ်တွေဆီမှာတော့ ရှားပါးသေးတာကိုး။ Apple CarPlay ကြောင့် iPhone မှာပါတဲ့ apps တွေအတော်များများကို ကားရဲ့ infotaintment မှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကိုယ်တွေနိုင်ငံမှာ အသုံးပြုလို့မရတဲ့ built-in ဂြိုဟ်တုလမ်းညွှန်နေရာမှာ iPhone ရဲ့ Maps ဒါမှမဟုတ် Google Maps နဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Apple CarPlay ချိတ်ဆက်ရာမှာတော့ USB ကြိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပြီး Gear Knob ရဲ့အရှေ့ဘက် infotainment display နဲ့ digital air condition တို့ရဲ့အောက်မှာ USB socket အပြင် ဖုန်းတင်ထားဖို့ နေရာပါထားပေးထားတာတွေ့ ရတယ်။ တစ်ခုရှိတာက Gear ကို P မှာထားတာတဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းတင်ဖို့နေရာနဲ့ Gear Knob ဟာ နီးလွန်းတဲ့အတွက် ထဲ့ရသွင်းရ ခက်ခဲတဲ့ အကျပ်အတည်းတော့ရှိတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဖုန်းထားဖို့သီးသန့်ပေး ထားတဲ့နေရာဟာ wireless charging စနစ်တပ်ဆင်ပေးထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
ကားမောင်းသူသာမက လိုက်ပါစီးနင်းမယ့်သူတွေအားလုံးကိုအကြိုက်တွေ့စေမှာကတော့ သားရေသားအကောင်းစားနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ ထိုင်ခုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်ခုံသားရေသားတွေဟာကောင်းမွန်မှုရှိတဲ့အပြင် အထိအတွေ့များတဲ့ လက်ကိုင်တစ်ခွေလုံး၊ Gear knob အောက်ပိုင်း ၊ တံခါးလက်တင်ဘောင်၊ dashboard အချို့အပိုင်းတွေနဲ့ glove box နေရာတွေကလည်း သားရေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတာပါပဲ။
Wipers တွေက မိုးအနည်းအများအပေါ်မူတည်ပြီး အလိုအလျောက်အတိုးအလျော့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့စနစ် တပ်ဆင်ပေးထားတာ သဘောကျစရာကောင်းပါတယ်။ ယာဉ်မောင်းသူအတွက် အလုပ်တစ်ခုလျော့သွားတာပေါ့။ ကင်မရာက အရှေ့မှာတစ်လုံး၊ ဘေးနှစ်ဘက်မှာ တစ်လုံးစီ၊ အနောက်မှာတစ်လုံးအပြင် built-in black box တစ်လုံး စုစုပေါင်း ငါးလုံးတောင်မှပါဝင်ပြီး infotainment display ကနေ မြင်ကွင်းတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သလို ထောက်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Hi-Fi speaker ကလည်း ၁၀ လုံးတောင် တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက် audio ပိုင်းမှာလည်း ထိပ်တန်းအဆင့်မှာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
“အဆင့်မြင့်နည်းပညာပိုင်း၊ ကျယ်ပြန့်တဲ့ digital driver display နဲ့ infotainment touch display ၊ ထိုင်ခုံအားလုံးသားရေအကောင်းစားနဲ့ Borgward BX7 TS ဟာ ဇိမ်အပြည့်နဲ့မောင်းနှင်စီးနင်းနိုင်မယ့်ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုင်ခုံတွေမှာ အပူပေးစနစ်ပဲပါဝင်တဲ့အချက်က ပူပြင်းမှုများတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ သိပ်အသုံးမကျလှပါဘူး။”
အရှေ့ထိုင်ခုံတွေဟာ electric motor စနစ်နဲ့ ချိန်ညှိနိုင်ပြီး အနောက်ထိုင်ခုံတွေဟာလည်း ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့ သက်သောင့်သက်သာလိုက်ပါနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။ ဒူးနေရာလွတ်ကျယ်ဝန်းပြီး ခေါင်ကလည်း မြင့်တယ်။
Boot တံခါးကိုတော့ ယာဉ်မောင်းသူနေရာက switch ကဖြစ်စေ၊ keyless entry ဖြစ်တဲ့ remote key ကနေဖြစ်စေ၊ အနောက်ဖုံးတံခါးခလုတ်ကဖြစ်စေဖွင့်နိုင်တာကတော့ ပစ္စည်းအများအပြားသယ်ဆောင်လာမယ့်အနေအထားမှာ အလွန်အသုံးဝင်မှာပါ။ Electric motor နဲ့ အဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ထည့်ပြောစရာ လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ အနောက်ပစ္စည်းထားခန်းဟာ တော်တော်လေးလည်းကျယ်ဝန်းပြီး Golf အိတ်အကြီး၊ ခရီးဆောင်အိတ် အကြီးတစ်လုံး သို့မဟုတ် နှစ်လုံးအပြင် အခြားလက်ဆွဲအိတ်တွေတောင်မှ ထည့်သွင်းနိုင်မယ့်အနေအထားပါ။
ဘီးအပိုမပါဝင်ပေမယ့် ဘီးပေါက်သွားတဲ့အနေအထားမှာ အရှိန်ကိုလျော့ပြီးမောင်းမယ်ဆိုရင် (90 kph နှုန်းခန့်) 16km ကနေ 50km အထိမောင်းနှင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ run-flat တာယာတွေကိုသုံးပေးထားတာကတော့ စိတ်ချလုံခြုံမှုပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ Octane 92 နဲ့လည်းမောင်းနှင်နိုင်ပေမယ့် 95 နဲ့မှ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် နေရာတော်တော်များများမှာ 95 ဝယ်ယူရရှိနိုင်တာမလို့ စိတ်ပူစရာတော့မရှိလှပါဘူး။ တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ လေအိတ်ပတ်လည် ရှစ်လုံးဟာ ယာဉ်မတော်တဆ ထိခိုက်မှု အနေအထားမျိုးစုံကနေ အကာအကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် safety ပိုင်းအရလည်းစိတ်ချရစေပါတယ်။
“ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ဘီးတစ်ဘီးချင်းစီကို လိုအပ်သလို ပါဝါပေးနိုင်မယ့် 4Max Int. AWD စနစ်၊ ကျယ်ဝန်းတဲ့ အနောက်ပစ္စည်းထားခန်း၊ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း သက်သောင့်သက်သာအတွင်းခန်းနဲ့ Borgward BX7 TS ဟာ မိသားစုတစ်စုရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ဘယ်လိုလမ်းအနေအထားမျိုးအတွက်ကိုမဆို အသုံးတည့် လက်တွေ့ကျမှာ သေချာပါတယ်။”
အသုံးပြုထားတဲ့ အင်ဂျင်ကတော့ 2.0 twin-turbo ဓါတ်ဆီအင်ဂျင်ပါ။ 2.0 TGDI ပါ။ အမြင့်ဆုံးပါဝါအနေနဲ့ 241hp အထိထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး 6-speed automatic transmission ကလည်း gear အကူးအပြောင်းကို ညက်ညောညင်သာစေပြီး semi-auto အဖြစ်နဲ့ manual အပြောင်းအလဲလုပ်လို့ရတာလည်းတွေ့ရတယ်။ နောက်တစ်ခုက စမ်းသပ်မောင်းနှင်ကြည့်ရသလောက်တော့ BX7 TS ရဲ့ turbo ပွင့်ပုံက rpm သတ်မှတ်ချက်နဲ့မဟုတ်ဘဲ အရှိန်တင်ရင်တင်သလို ပွင့်တာကြောင့် လိုအပ်တဲ့အမြန်နှုန်းကို တစ်ခဏအတွင်းရရှိနိုင်တယ်။ 0-100kph အရှိန်နှုန်းရဖို့ဆိုရင် အလူမီနီယံ accelerator ကို ကိုးစက္ကန့်သာနင်းဖို့ လိုအပ်ခဲ့တဲ့အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာလည်း မဆိုးပါဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အမြန်ဆုံးမြန်နှုန်းကတော့ 240kph ပါ။
19-inch အလွိုင်းခွေနဲ့ဘီးတွေကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီး ဘီးတစ်ဘီးချင်းစီရဲ့ လေပေါင်ကို 12.3-inch driver display မှာကြည့်ရှုနိုင်တာကလည်း ယာဉ်မောင်းသူအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ feature တစ်ခုပါပဲ။ 60-litre အထိဝင်ဆံ့တဲ့ဆီတိုင်ကီနဲ့အတူ ပုံမှန် mode မှာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မြင့် ဆီစားနှုန်းမြင့်မြင့်နဲ့ မောင်းနှင်နိုင်ပြီး ဆီစားနှုန်းသက်သာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ Eco mode ကိုပြောင်းလဲမောင်းနှင်နိုင်တယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ဆီစားနှုန်း 33mpg အထိရရှိနိုင်တယ်လို့ Borgward ကဆိုထားပေမယ့် ပုံမှန် sporty mode နဲ့ဆိုရင်တော့ သူ့ထက် ပိုပြီး ဆီစားနှုန်းမြင့်မားပါလိမ့်မယ်။
အရှေ့နဲ့အနောက်မှာတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ sensors ဆယ်လုံးဟာ parking တွေအတွက်ရော ကားနောက်ဆုတ်တဲ့ အချိန်မှာပါ အထောက်အကူ ကောင်းကောင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး BSD (blind spot detection) ကို နံဘေးမှန်တွေမှာတပ်ဆင်ပေးထားတာကတော့ နံဘေးမှန်တွေကြည့်ပြီး လမ်းကြောအကူးအပြောင်း လုပ်လေ့ရှိသူတွေအတွက် အသုံးတည့်လှပါတယ်။ တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ Cruise Control ကတော့ အမြန်လမ်းတွေပေါ်မှာ သက်သာရာရစေမှာဖြစ်ပြီး HAC (Hill start Assist Contorl) ကတော့ ကားပိတ်တဲ့အချိန် ကုန်းတက်တွေမှာ အကောင်းဆုံးအကူအညီပေးမှာပါ။ ဝန်အပြည့်နဲ့ဆိုရင် အနိမ့်ဆုံး 6.7-inch ရှိတဲ့ groundclerance ကတော့ မြို့တွင်းစီးရာမှာ မြင့်မားတဲ့ slowdown တွေ၊ လမ်းကြမ်းတွေက ကမူတွေကို သာသာလေးဖြတ်ကျော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
“လက်ရှိအချိန် ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်း ပေးရတဲ့နှုန်းနဲ့ ထိုက်တန်မှုရှိတဲ့ ကားတစ်စီးဖြစ်တာမလို့ မိသားစုငါးယောက်စီး SUV အမျိုးအစားဝယ်ယူမယ့်သူတွေရဲ့ အဝယ်စာရင်း ထိပ်ဆုံးငါးစီးထဲမှာ ထည့်သွင်းထားသင့်တဲ့ BX7 TS ပါပဲ။ Sporty ဖြစ်တာကိုပါလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ထိပ်ဆုံးနေရာတောင် ပေးထားနိုင်ပါသေးတယ်။”
Length x Width x Height (mm) : 4715 x 1923 x 1687
Minimum Ground Clearance (mm) : 170 (full-load)
Curb Weight (kg) : 1779
Maximum Power (hp/rpm) : 241/5500
Maximum Torque (Nm/rpm) : 340/2000-4500
Wheel : 235/60 R19
HID H/Lamp : yes
Smokey H/Lamp : yes
LED DRL : yes
Panorama Sunroof : yes
Anti-UV/Heat-insulated Glass : yes
Electric Adjustable/Heated/Folding Side Rear View Mirror with IMS System : yes
Side Rear View Mirror Anti-Glare : yes
Rhombus Grille : yes
Power Tail Gate : yes
Leather Steering Wheel : yes
Alloy Pedal : yes
Pedal-illuminating : yes
TFT Cluster : yes
ECM Inside Rear View Mirror : yes
Ambient Lights : yes
Dual Zone Auto Air Condition : yes
AQS : yes
Leather+Rhombus Stripe Seats : yes
Sport-style Seats : yes
Front Row Seats with IMS Function : yes
Front Row Heated Seats : yes
Front Row Massage Seats : yes
Power 8-way and 4-way lumber support Adjustable Front Seats : yes
Rear Heated Seats : yes
DAB Antenna : yes
Front 12.3-inch Touchscreen : yes
Mobile Phone Synchronization : yes
10-Speaker Hi-Fi Stereo System : yes
AVM (Around View Monitor) : yes
Dual Front Airbags : yes
Front and Rear Side Curtain Airbags : yes
Front Row 3-Point S/Belt : yes
Vehicle Stability Control (ESP/DSC/VSC) : yes
EBD/CBC : yes
Traction Control (ASR/TCS/TRC) : yes
Brake Assist (EBA/BAS/BA) : yes
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) : yes
Collapsible Steering Column Door Auto Unlock After Crash : yes